Ireo fiasa vaovao 11 an'ny Android 11 izay eto | Androidsis
Android 11 dia eto aorian'ny volana fampandrosoana miaraka amin'ny topy mason'ny developer ary nampiseho taminay ny sasany tamin'ireo vaovaony lehibe indrindra izy ireo. Hanao famintinana ny zavatra ilaintsika isika hananana ny Android 11 ho toy ny fototra ho an'ny sosona manokana na ho an'ireo izay manana Pixel.
Ary ho an'izany Google dia namintina tamin'ny vaovao 11 izay mampiavaka an'ity kinova Android vaovao ity ary ho tonga amin'izao andro izao ary koa amin'ny volana ho avy ho an'ny telefaona maro hafa. Ataovy.
1 Ireo fiasa vaovao 11 an'ny Android 11
1.1 Ireo resaka izay zava-dehibe ao amin'ny takelaka fampandrenesana
1.2 Miboiboika chat chat
1.3 Farany: firaketana an-tsarimihetsika amin'ny Android 11
1.4 Fanaraha-maso tsara kokoa ho an'ny mandeha ho azy ao an-trano
1.5 Fanaraha-maso tsara kokoa ho an'ny multimedia
1.6 Android Auto ho an'ny rehetra (raha mbola mifanentana ny fiaranao)
1.7 Fanaraha-maso granular lehibe kokoa amin'ny alàlana
1.8 Mamerina ny alalana amin'ny fampiharana izay tsy ampiasainay matetika
1.9 Fanavaozana ny modely an'ny rafitra Google Play
1.11 Ho an'ny tompon'ny Pixel 2 ary avo kokoa
Ireo fiasa vaovao 11 an'ny Android 11
Miaraka amin'io antokom-pinoana mifototra amin'ny isa maromaro ary mamela ireo anarana mamy ireo, ny Android 11 dia manana faniriana te-hanome traikefa tsara kokoa miaraka amin'ny antsipiriany sasany hamonjy antsika hametraka fampiharana rindrambaiko aza izany.
Ireo resaka izay zava-dehibe ao amin'ny takelaka fampandrenesana
Ny voalohany amin'ireo zava-baovao ireo dia a toerana manokana izay handray azy ireo resaka rehetra ireo ary ny resadresaka izay ananantsika amin'ireo fampiharana marobe misy ankehitriny noho ireo antony ireo.
Na dia amin'ity habaka ity ao amin'ny tontonana fampandrenesana dia hanana ny fahaizana manao laharam-pahamehana isika ireo chat izay mahaliana antsika foana ny eo amin'ny pejy eo aloha. Izany hoe ny resaka izay zava-dehibe amintsika dia ho eo aloha.
Miboiboika chat chat
Ireo malaza miboiboika messenger Facebook izy ireo izao no làlan'ny rindranasa chat hafa ananantsika amin'ny Android 11. Izany hoe afaka miverina manao resadresaka am-bava miaraka amin'ny bubble izay hijanona mitsingevana toa Messenger.
Eny, izany tokoa isika fananana chat animated amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo apps tianao indrindra, afaka miverina aminy isika fa tsy mila manokatra ny rindranasa lehibe. Ka ny multitasking dia miverina handray ny laharana voalohany tokony hananany amin'ny rafitra iray toy ny Android; aza hadino ity fikajiana ANDRIAMANITRA an'ny calculatera Samsung ho an'ny multitasking.
Farany: firaketana an-tsarimihetsika amin'ny Android 11
Ny iray amin'ireo fangatahana lehibe indrindra nataon'ny vondrom-piarahamonina Android dia ny tsy fisian'ny firaketana an-tsarimihetsika natsofoka tao anatin'ilay rafitra. Manana izany ihany isika amin'ny farany afaka misambotra sy mizara izay mitranga eo amin'ny efijery.
Azonao atao firaketana miaraka amin'ny feo avy amin'ny mikrô, fitaovana, na izy roa tsy mila mametraka fampiharana antoko fahatelo; teny an-dalana, izahay dia manoro hevitra ireo rindranasa ireo handraisana ny efijery Raha tsy misafidy ny hanana Android 11 ianao.
Fanaraha-maso tsara kokoa ho an'ny mandeha ho azy ao an-trano
Efa manana isika isaky ny mandeha fitaovana mifandray bebe kokoa ao an-trano ary Android 11 dia tonga hanome fanampin'ity traikefa ity. Ao amin'ny Android 11 isika dia afaka miditra amin'ireo fitaovana marani-tsaina mifandray amin'ny toerana iray ihany.
Manamboatra a tsindrio lava ny bokotra herinaratra handeha amin'ny fifehezana ny termostat isika, na ireo andiana jiro mavokely izay napetrakay tao an-trano.
Fanaraha-maso tsara kokoa ho an'ny multimedia
Google hanaraka mamolavola endrika ny zavatra rehetra misy ifandraisany amin'ny playback multimedia Ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nohamafisin'izy ireo ny fiovan'ny fitaovana samihafa mamerina ny mozika, horonan-tsary na sarinay.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia afaka mandeha amin'ny fihainoana ny hira ankafizintsika ao amin'ny Spotify amin'ny alàlan'ny headphones isika, mankany esory izy ireo ary milalaova mivantana amin'ireo mpandahateny Bluetooth nifandray izahay.
Android Auto ho an'ny rehetra (raha mbola mifanentana ny fiaranao)
raha mbola miankina amin'ny mpanamboatra ny fiaranao sy ny taona Mba hanohanana ny Android Auto, raha mbola manana izany ianao, Android 11 dia hihazakazaka Android Auto tsy misy olana. Ny telefaona rehetra misy an'ity kinova vaovao ity dia ho afaka hampiasa azy.
Fanaraha-maso granular lehibe kokoa amin'ny alàlana
Apetrany ny accent amin'ny fiarovana ireo singa ireo izay mety hiteraka fanafihana ny fiainantsika manokana toa ny mikrô na ny fakan-tsary. Raha nanana fangatahana alalana hampiasa ireo singa ireo izahay, dia izao, rehefa takiana indray ny fampiasana azy ireo, dia hangataka alalana amin'ny mpampiasa indray.
Mamerina ny alalana amin'ny fampiharana izay tsy ampiasainay matetika
Android 11 dia hamerina ny fahazoan-dàlan'ireo fampiharana ireo izay matetika tsy ampiasainay hisorohana ny fidirana amin'ny angon-drakitra. Amin'ny fotoana ampiasantsika an'io fampiharana io indray, ny Android 11 dia hangataka antsika hanome azy alalana amin'ny haino aman-jery, mikrô, sns.
Fanavaozana ny modely an'ny rafitra Google Play
Ny fikasan'i Google dia mampiasa Google Play hanavao ny rafitra amin'ny modules. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanavaozana ny filaminana sy ny fiainana manokana dia hitranga amin'ny alàlan'io lalana io.
Noho izany ho hitantsika ny fanavaozana ny rafitra Android tsy mila miandry fanavaozana ny rafitra lehibe. Zava-baovao tokony hihainoana azy noho ny tanjaka azony omena amin'ny Android amin'ny fotony.
Mihamaro hatrany ny zavatra hitantsika vaovao misimisy kokoa mifandraika amin'ny «Orinasa» ary izany dia mifandray amin'ny fampiasana matihanina izay omena amin'ny finday Android. Misy ifandraisany amin'ny Android 11 ny fahazoana ireo tsiambaratelo sy fepetra fiarovana anananao ao anaty fitaovana iray hampiasanao matihanina.
Un mombamomba ny asa izay manome ny departemanta IT fitaovana hampiasana fitaovana amin'ny fanaraha-maso lavitra nefa tsy miditra amin'ny data na hetsika ataonao amin'ny telefaona.
Ho an'ny tompon'ny Pixel 2 ary avo kokoa
Vaovao no horaisina ho an'ny alamino sy tantano ny telefaoninao ho sosokevitra momba ny fampiharana ao an-trano araky ny fanaontsika isan'andro izay ataontsika isan'andro.
Ary toy izany koa ny Fampisehoana vaovao 11 an'ny Android 11 izay nanomboka tonga nandritra ny ora maro tamin'ny Pixel, OnePlus, Xioami, OPPO ary realme sasany. Ankehitriny mba hahitana ireo traikefa vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Android 11 no eto ary ny vaovao 11 lehibe indrindra